WKG को विश्वास - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
पवित्र शास्त्रको गवाही अनुसार परमेश्वर तीनवटा अनन्त, समान तर फरक व्यक्ति, पिता, पुत्र र पवित्र आत्मामा ईश्वरीय हुनुहुन्छ। उहाँ मात्र सत्य परमेश्वर, अनन्त, अपरिवर्तनीय, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उहाँ स्वर्ग र पृथ्वीको सृष्टिकर्ता, ब्रह्माण्डको संरक्षक र मानिसका लागि उद्धारको स्रोत हुनुहुन्छ। ईश्वरीय भए पनि, परमेश्वर प्रत्यक्ष र व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिहरूमा काम गर्नुहुन्छ। भगवान प्रेम र असीम भलाई हुनुहुन्छ ...
परमेश्वर पिता परमात्माको पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ मौलिक, जसबाट पुत्र अनन्त कालदेखि जन्मेका थिए र जसबाट पवित्र आत्मा सदाका लागि पुत्रको माध्यमबाट बाहिर निस्कनुभयो। पिताले, जसले पुत्र मार्फत देखिने र अदृश्य सबै थोक सृजना गर्नुभयो, पुत्रले मुक्ति पाउन पठाउनुभयो र हाम्रो नविकरण र परमेश्वरको सन्तानको रूपमा स्वीकार्यताको लागि पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। (यूहन्ना १: १, १,, १ 1,1.14; रोमी १ 18:;; कलस्सी १: १ 15,6-१-1,15; यूहन्ना :16:१:3,16; १:14,26:२:15,26; १:२; रोमी ...
ईश्वर पुत्र ईश्वरको दोस्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जुन सनातनदेखि पिताबाट जन्मेको थियो। उहाँ पिताको वचन र छवि हुनुहुन्छ उहाँद्वारा र सबै कुरा उहाँ सृष्टि गर्नुभयो। उहाँ पिताले येशू ख्रीष्ट, परमेश्वर, शरीरमा प्रकट गर्नुभयो जुन हामीलाई उद्धार पाउन सक्षम तुल्याएको थियो। उहाँ पवित्र आत्माबाट जन्म लिनुभयो र भर्जिन मरियमको जन्म, उहाँ पूर्ण रूपमा परमेश्वर र पूर्ण मानव हुनुहुन्थ्यो, एक व्यक्तिको दुई स्वभाव एकजुट गर्नुभयो। ऊ, छोरा ...
पवित्र आत्मा ईश्वरको तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँ पिताबाट सदासर्वदा पुत्रको मार्फत जानुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नु भएको त्यो शान्तिदाता उहाँ सबै विश्वासीहरूलाई पठाउनु भएको हो। पवित्र आत्मा हामीमा बास गर्नुहुन्छ, हामीलाई पिता र पुत्रसँग एक बनाउनुहुन्छ, र पश्चात्ताप र पवित्रता मार्फत हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ, र निरन्तर नविकरणको माध्यमद्वारा हामीलाई ख्रीष्टको स्वरूपमा बदल्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा बाइबलमा प्रेरणा र भविष्यवाणीको स्रोत हो र एकता र ...
परमेश्वरको राज्य, व्यापक अर्थमा, परमेश्वरको सार्वभौमिकता हो। परमेश्वरको शासन मण्डली र उनको इच्छालाई सुम्पने प्रत्येक विश्वासीको जीवनमा प्रस्टै देखिएको छ। ख्रीष्टको दोस्रो आगमन पछि, परमेश्वरको राज्य पूर्ण रूपमा एक विश्व व्यवस्थाको रूपमा स्थापित हुनेछ, जब सबै चीजहरू यसकै अधीनमा हुनेछन्। (भजन २: 2,6--;;::: १-२; लूका १:: २०-२१; दानियल २::9; मर्कूस १: १ 93,1-१-2; १ कोरिन्थी १:: २ 17,20-२21; प्रकाश ११:१:2,44; / / २१ / २२ -२;; २२.१--1,14) वर्तमान र भविष्य ...
भगवानले मानिस र स्त्रीलाई परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले मानिसलाई आशिष दिनुभयो र उसलाई गुणा र पृथ्वी भर्ने आज्ञा गर्नुभयो। प्रेममा प्रभुले मानिसलाई पृथ्वीलाई भण्डारेको रूपमा वशमा राख्न र यसका जीवहरूलाई शासन गर्ने शक्ति दिनुभयो। सृष्टि कथामा मानिस सृष्टिको मुकुट हो। पहिलो मानव आदम हो। आदमले पाप गरेका व्यक्तिको प्रतीक हो, मानवता आफ्नो सृष्टिकर्ताको बिरूद्ध विद्रोह गर्दछ र ...
धर्मशास्त्र भनेको परमेश्वरबाट प्रेरणा भएको वचन हो, सुसमाचारको विश्वासयोग्य गवाही हो, र परमेश्वरले मानिसमा प्रकट गर्नुभएको सत्य र सही प्रजनन। यस सन्दर्भमा, पवित्र धर्मशास्त्र सिद्धान्त र जीवनको सबै प्रश्नहरूमा चर्चको लागि त्रुटिपूर्ण र आधारभूत हुन्छ। येशू को हुनुहुन्छ र येशूले सिकाउनुभएको कुरा हामी कसरी जान्दछौं? हामी कसरी थाहा पाउन सक्छौं यदि एउटा सुसमाचार वास्तविक छ वा गलत हो? शिक्षण र जीवनको लागि आधिकारिक आधार के हो? बाइबल हो ...
चर्च, ख्रीष्टको शरीर, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने र जसमा पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ सबैको समुदाय हो। सुसमाचार प्रचार गर्न, ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिन आज्ञा गर्नुभएको सबै कुरा सिकाउन र बगाललाई खुवाउन मण्डलीलाई आज्ञा दिइएको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा, पवित्र आत्माद्वारा निर्देशित चर्चले बाइबललाई एक मार्गनिर्देशनको रूपमा लिन्छ र उहाँ जीवित शिर, येशू ख्रीष्टतर्फ निरन्तर उन्मुख हुनुहुन्छ। बाइबल भन्छ: ख्रीष्टमा को ...
यदि कसैले ख्रीष्टमा भरोसा राख्छ भने ऊ ख्रीष्टियन हो। पवित्र आत्माद्वारा नवीकरण गरेपछि, इसाईले नयाँ जन्मको अनुभव गर्दछन् र परमेश्वर र उनका सँगी मानवहरूसँगको उचित सम्बन्धमा ल्याइन्छन् जुन धर्मपुत्रको माध्यमले परमेश्वरको अनुग्रहबाट हुन्छ। एक इसाईको जीवनलाई पवित्र आत्माको फलले चिन्हित गर्दछ। (रोमी १०. -10,9 -१-13; गलाती २.२०; यूहन्ना 2,20.--3,5; मर्कूस .7..8,34; यूहन्ना १.१२-१-1,12; 13.१-3,16-१-17; रोमी 5,1.१; 8,9; यूहन्ना १ 13,35, 5,22 23; गलाती:: २२-२) यसको अर्थ के हो? बच्चा ...
एन्जिलहरू आत्मिक प्राणीहरू हुन्। तपाईं स्वतन्त्र इच्छा संग संपन्न हुनुहुन्छ। पवित्र दूतहरूले परमेश्वरको सन्देशवाहक र एजेन्टको रूपमा सेवा गर्दछन्, मुक्ति पाउनलाई ती अधीन आत्माहरू हुन्, र ख्रीष्टको आगमनमा उहाँसँगै आउनेछन्। अनाज्ञाकारी स्वर्गदूतहरूलाई भूत, दुष्टात्मा र अशुद्ध आत्माहरू भनिन्छ। दूतहरू आत्मिक प्राणीहरू, दूतहरू र परमेश्वरका सेवकहरू हुन्। (हिब्रू १:१:1,14; प्रकाश १: १; २२:;; मत्ती २:1,1::22,6१; २ पत्रुस २:;; मार्क १.२25,31; मत्ती १०.१) ...
शैतान एक पतित परी हो, आत्मिक संसारमा दुष्ट शक्तिहरूका नेता। धर्मशास्त्रले उहाँलाई विभिन्न तरिकामा सम्बोधन गरेको छ: शैतान, विरोधी, त्यो दुष्ट, हत्यारा, झूटा, चोर, प्रलोभक, हाम्रा भाइहरूको दोष दिने, ड्रेगन, यस संसारको ईश्वर। ऊ निरन्तर विद्रोहमा छ। आफ्नो प्रभावको माध्यमबाट, उसले मानिसहरू बीच कलह, भ्रम र अनाज्ञाकारिता छर्दछ। ख्रीष्टमा ऊ पहिले नै पराजित भइसकेको छ र उसको शासन र ईश्वरको रूपमा प्रभाव ...
येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर परमेश्वरको अनुग्रहको माध्यमबाट सुसमाचार मुक्तिको शुभ समाचार हो। यो सन्देश हो कि ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूका लागि मर्नुभयो, जुन उसलाई गाडिन्थ्यो, तेस्रो दिनमा धर्मशास्त्रमा लेखिए, र त्यसपछि आफ्ना चेलाहरूकहाँ देखा पर्नुभयो। येशू ख्रिष्टको मुक्ति कार्यको माध्यमबाट हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दछ भन्ने शुभ समाचार यो हो। (१ कोरिन्थी १ 1: १-;; प्रेरित :15,1::5१; लूका २:: -5,31 24,46--48; जोन ...
इसाई व्यवहार हाम्रो उद्धारकर्ताप्रति विश्वास र मायालु वफादारीमा आधारित छ जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टमाथिको भरोसा सुसमाचार र प्रेमको कामहरूमाथिको विश्वासमा व्यक्त गरिएको छ। पवित्र आत्माको माध्यमबाट, ख्रीष्टले आफ्ना विश्वासीहरूको हृदय परिवर्तन गर्नुभयो र तिनीहरूलाई फल फलाउनुहुन्छ: प्रेम, आनन्द, शान्ति, विश्वास, धैर्य, दया, नम्रता, आत्म-नियन्त्रण, न्याय र सत्य। (पहिलो जोन ...
परमेश्वरको अनुग्रह त्यो अनुग्रहको अनुग्रह हो जुन परमेश्वर आफ्ना सबै सृष्टिमा प्रदान गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ। व्यापक अर्थमा, परमेश्वरको अनुग्रह ईश्वरीय आत्म-प्रकाश को हरेक काम मा व्यक्त गरिएको छ। अनुग्रहको लागि धन्यवाद, मानिस र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डहरू येशू ख्रीष्टद्वारा पाप र मृत्युबाट बचाइन्छन्, र अनुग्रहको धन्यवादले मानिसलाई परमेश्वर र येशू ख्रीष्टलाई चिन्न र प्रेम गर्न र अनन्त मुक्तिको आनन्दमा प्रवेश गर्ने शक्ति प्राप्त गर्दछ भगवानको राज्य। (कलस्सी १.२०; ...
पाप अधर्म हो, परमेश्वरको बिद्रोहको एक अवस्था। आदम र हव्वामार्फत पाप संसारमा आएको समयदेखि नै मानिस पापको जुवामुनि रहेको छ - यो जुवा जसलाई येशू ख्रीष्टमार्फत परमेश्वरको अनुग्रहले मात्र हटाउन सकिन्छ। मानिसजातिको पापी अवस्थाले आफूलाई र आफ्नै इच्छाहरूलाई परमेश्वर र उहाँको इच्छाभन्दा माथि राख्ने झुकावमा देखाउँछ। पापले परमेश्वरबाट टाढा बस्छ र कष्ट र मृत्यु निम्त्याउँछ। किनभने सबै ...
परमेश्वरमा विश्वास भनेको परमेश्वरबाटको वरदान हो, जुन उहाँको अवतार पुत्रमा जडिएको छ र पवित्र शास्त्रीमा पवित्र आत्माको गवाही मार्फत उहाँको अनन्त वचनबाट ज्ञान भएको छ। परमेश्वरमाथिको विश्वासले मानव हृदय र दिमागलाई परमेश्वरले अनुग्रहको उपहार, मुक्तिलाई ग्रहणयोग्य बनाउँदछ। येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्माको माध्यमबाट विश्वासले हामीलाई आत्मिक रूपले साम्प्रदायिक र परमेश्वर हाम्रा पिताप्रति वफादार हुन सक्षम गर्दछ। येशू ख्रीष्ट लेखक र परिष्कृत हुनुहुन्छ ...
मुक्ति भनेको परमेश्वरसँगको सम्वन्धको पुन: स्थापना र पाप र मृत्युको बन्धनबाट सम्पूर्ण सृष्टिको छुटकारा हो। भगवानहरूले केवल वर्तमान जीवनको लागि मात्र होइन तर येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार्ने प्रत्येकलाई अनन्तसम्मको लागि पनि मुक्ति दिनुहुन्छ। मुक्ति भनेको परमेश्वरबाटको एउटा उपहार हो जुन अनुग्रहद्वारा सम्भव भएको हो, येशू ख्रीष्टमा विश्वासको आधारमा दिइन्छ, व्यक्तिगत फाइदा वा राम्रोको योग्य छैन ...
बाइबलले पुष्टि गर्दछ कि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू सबैले मुक्ति पाउनेछन् र कुनै पनि कुराले तिनीहरूलाई ख्रीष्टको हातबाट टाढा फाल्नेछैन। बाइबलले प्रभुको असीम निष्ठा र हाम्रो मुक्तिको लागि येशू ख्रीष्टको पूर्णतामा जोड दिन्छ। उनी सबै मानिसहरुप्रति परमेश्वरको अनन्त प्रेममा जोड दिइन् र सुसमाचारलाई विश्वास गर्ने सबैको मुक्तिको लागि परमेश्वरको शक्ति हो भनेर वर्णन गर्छिन्। यस उद्धारको आश्वासनको अधिकारमा, विश्वासीले ...
धर्मीकरण भनेको येशू ख्रीष्टमा र उहाँ मार्फत परमेश्वरबाट पाएको अनुग्रहको कार्य हो, जसद्वारा विश्वासीलाई परमेश्वरको नजरमा धर्मी ठहराइन्छ। तसर्थ, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर मानिसलाई परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ र आफ्ना प्रभु र उद्धारकसँग शान्ति पाउन सक्नुहुन्छ। ख्रीष्ट वंशका हुनुहुन्छ र पुरानो करारको मिति सकिएको छ। नयाँ करारमा, परमेश्वरसंगको हाम्रो सम्बन्ध बिभिन्न आधारमा आधारित छ, यो बिभिन्न सम्झौतामा आधारित छ। (रोमी,, २१--3१; ,,१-21; ...
इसाई सब्बथ भनेको येशू ख्रीष्टको जीवन हो, जसमा हरेक विश्वासीले साँचो आराम पाउँछ। दस आज्ञामा इस्रायलले आज्ञा गरेको साप्ताहिक सातौं दिन शबाथ एक छाया थियो जुन हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको वास्तविक यथार्थतालाई औंल्याउँछ। (हिब्रू:: -4,3.8-१०; मत्ती ११: २ 10--11,28०; प्रस्थान २०: -30-११; कलस्सी २: १-2-१-20,8) ख्रीष्टको उपासनामा मुक्ति मनाउनु भनेको परमेश्वरले हाम्रो लागि गर्नुभएका अनुग्रह कार्यहरूमा हाम्रो प्रतिक्रिया हो।…
दयालु ईश्वरप्रति पश्चात्ताप ("पश्चात्ताप" भनेर पनि अनुवाद गरिएको छ) मनोवृत्ति परिवर्तन हो जुन पवित्र आत्माले ल्याएको थियो र परमेश्वरको वचनमा जडिएको छ। पश्चात्ताप गर्नु भनेको आफ्नै पापीपनको बारेमा सचेत हुनु र येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा पवित्र गरिएको नयाँ जीवनको साथ हो। (प्रेरित २::2,38; रोमी २:;; १०:१:2,4; रोमी १२: २) पश्चात्तापलाई बुझ्नको लागि सिक्नु एउटा डरलाग्दो डर हो, "किनकि एक जना जवान व्यक्तिको उनको डरको कारण परमेश्वरले उसलाई उनीसँग भएको ठूलो डर थियो ...
पवित्रता अनुग्रहको एक कार्य हो जसद्वारा परमेश्वरले येशू ख्रीष्टको धार्मिकता र पवित्रतालाई विश्वासीमा श्रेय दिनुहुन्छ र उसलाई यसमा समावेश गर्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर पवित्र पार्नुपर्दछ र त्यो व्यक्तिमा पवित्र आत्माको उपस्थितिले प्रभाव पार्दछ। (रोमी :6,11:११; १ यूहन्ना १:--;; रोमी 1:२२; २ थिस्सलोनिकी २:१:1,8; गलाती 9: २२-२6,22) कन्सिस अक्सफोर्ड शब्दकोश अनुसार पवित्र पार्नुको अर्थ "अलग गर्नु वा राख्नु हो" केहि पवित्र ", वा" पापबाट ...
आराधना भनेको परमेश्वरको महिमाको लागि ईश्वरीय सृष्टि गरिएको प्रतिक्रिया हो। यो ईश्वरीय प्रेमबाट उत्प्रेरित हुन्छ र उहाँको सृष्टि तिर ईश्वरीय आत्म-प्रकाशबाट उत्पन्न हुन्छ। उपासनामा, पवित्र आत्माद्वारा मध्यस्थता गरेको येशू ख्रीष्ट मार्फत विश्वासी परमेश्वर पितासँग कुराकानी गर्न प्रवेश गर्दछन्। उपासनाको अर्थ नम्रता र खुशीको साथ सबै कुरामा भगवानलाई प्राथमिकता दिनु पनि हो। यसले मनोवृत्ति र कार्यहरूमा व्यक्त गर्दछ ...
पानीको बप्‍तिस्मा विश्वासीको पश्चातापको चिन्ह हो, यो संकेत हो कि उसले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्दछ, येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानमा भाग लिन्छ। "पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा लिनु" भनेको पवित्र आत्माको नवीकरण र सफा गर्ने काम हो। भगवानको विश्वव्यापी चर्च डुबाएर बप्तिस्माको अभ्यास गर्दछ। (मत्ती २ 28,19: १;; प्रेरित २::2,38; रोमी:: -6,4--5; लूका :3,16:१:1; १ कोरिन्थी १२:१:12,13; १ पत्रुस १:--;; मत्ती ...
प्रभुको भोज भनेको येशूले विगतमा के गर्नुभयो भन्ने कुराको सम्झौटो हो, जुन उहाँसँग अहिले हाम्रो सम्बन्धको प्रतीक हो, र भविष्यमा उसले के गर्नेछु भनेर वाचा गर्दछ। जब हामी संस्कार मनाउँछौं, हामी रोटी र दाखमद्य लिएर हाम्रो मुक्तिदाताको सम्झना गर्दछौं र उहाँ नआउन्जेल उसको मृत्युको घोषणा गर्दछौं। प्रभुको भोजले हाम्रो प्रभुको मृत्यु र पुनरुत्थानमा भाग लिइरहेको छ, जसले आफ्नो शरीर दिनुभयो र उहाँको रगत बहाउनुभयो जसले गर्दा हामी क्षमा पाउन सक्छौं ...
इसाई वित्तीय भण्डारेपन भनेको व्यक्तिगत संसाधनहरूको प्रबन्ध गर्ने तरिका हो जुन परमेश्वरको प्रेम र उदारता प्रतिबिम्बित गर्दछ। यसमा व्यक्तिगत कोषहरूको एक अंश चर्चको काममा चन्दा दिन प्रतिबद्धता पनि समावेश छ। सुसमाचार प्रचार गर्न र बगाललाई खुवाउन मण्डलीले ईश्वर-प्रदत्त कार्यलाई अनुदान दिएको छ। दिने र दानले श्रद्धा, विश्वास, आज्ञाकारिता र ...
मण्डलीको शिर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उसले पवित्र आत्माद्वारा चर्चमा पिताको इच्छा प्रकट गर्दछ। पवित्र शास्त्रले पवित्र आत्माले चर्चलाई समुदायको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सिकाउनुहुन्छ र शक्ति दिनुहुन्छ। विश्वव्यापी चर्च अफ ईश्वरले यसको मण्डलीहरूको हेरचाह गर्न र एल्डरहरू, डिकनहरू र डिकनहरू र नेताहरूको नियुक्तिमा पवित्र आत्माको नेतृत्वलाई पछ्याउने प्रयास गर्दछ। (कलस्सी १:१:1,18; एफिसी १: १ 1,15-२23; यूहन्ना १:: १ 16,13-१-15; ...
भविष्यवाणीले मानिसजातिको लागि परमेश्वरको इच्छा र योजना प्रकट गर्छ। बाइबलीय भविष्यवाणीमा, परमेश्वरले घोषणा गर्नुभयो कि मानव पापलाई माफ गरीएको छ र येशू ख्रीष्टको छुटकाराको काममा विश्वास गरेर पश्चात्ताप गरिएको छ। भविष्यवाणीले सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता र न्यायाधीशको रूपमा सबै कुराको घोषणा गर्दछ र मानवतालाई उसको प्रेम, अनुग्रह र वफादारीको आश्वासन दिन्छ र विश्वासीलाई येशू ख्रीष्टमा ईश्वरीय जीवन बिताउन प्रेरित गर्दछ। (यशैया: 46,9: -11 -११; लूका २:: -24,44 48; ...
विश्वासीहरूको हकवाला भनेको पिता, पुत्र र पवित्र आत्मासँग मिलेर परमेश्वरका सन्तानहरूको रूपमा ख्रीष्टमा मुक्ति र अनन्त जीवन हो। अहिले पनि बुबाले विश्वासीहरूलाई उनको छोराको राज्यमा सार्दैछन्; तिनीहरूको उत्तराधिकार स्वर्गमा राखिएको छ र ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा पूर्णतामा दिइनेछ। पुनरुत्थान भएका सन्तहरूले परमेश्वरको राज्यमा ख्रीष्टसँग शासन गर्दछन्। (१ यूहन्ना:: १-२; २:२:1; रोमी:: १ 3,1-२१; कलस्सी १:१:2; दानियल :2,25:२:8; १ पत्रुस १: -16-;; ...
नरक अयोग्य पापीहरू छनौट गरेको छ कि भगवानबाट अलग र अलग्गै छ। नयाँ नियममा नरकलाई चित्रणको रूपमा "आगोको ताल", "अन्धकार" र गेहेन्ना (यरूशलेम नजिकको हिन्नोम उपत्यका पछि, फोहोरको चिहान) भनिन्छ। नरकलाई दण्ड, कष्ट, सतावट, अनन्त विनाश, रुवाउने र दाँत च्याँपने को रूपमा वर्णन गरिएको छ। शिओल र हेडिस, बाइबलीयबाट दुई सर्तहरू ...
बाइबलीय पदावलीको रूपमा "स्वर्ग" ले परमेश्वरको छनौट गरेको वासस्थान, साथै परमेश्वरका सबै उद्धार पाएका बच्चाहरूको अनन्त भाग्यलाई जनाउँदछ। "स्वर्गमा हुनु" को अर्थ हो: परमेश्वरमा ख्रीष्टमा रहनु जहाँ मृत्यु, उदासिनता, रुवाइ र पीडा नै छैन। स्वर्गलाई "अनन्त आनन्द", "आनंद", "शान्ति" र "परमेश्वरको धार्मिकता" को रूपमा वर्णन गरिएको छ। (१ राजा:: २-1--8,27०; व्यवस्था २ 30:१:5; मत्ती:: 26,15; प्रेरित:: 6,9 7,55--56; यूहन्ना १:: २-;; प्रकाश २१: 14,2-3- 21,3-4; २२: १-;; २ ... ।
मध्यवर्ती अवस्था भनेको राज्य हो जहाँ मृत शरीरको पुनरुत्थान नभएसम्म हुन्छ। सान्दर्भिक धर्मशास्त्रको व्याख्याको आधारमा, यस मध्यवर्ती राज्यको प्रकृतिबारे इसाईहरूको बिभिन्न दृष्टिकोण छन्। केही परिच्छेदहरूले भन्दछ कि मरेका मानिसहरूले यस अवस्थालाई सचेतपूर्वक अनुभव गर्छन्, अरूहरू भन्छन् कि उनीहरूको चेतना बुझेको छ। विश्वव्यापी चर्च अफ भगवानले दुबै विचारहरूको सम्मान गर्नुपर्दछ भनेर विश्वास गर्दछ। (यशैया १:: -14,9 -१०; इजकिएल ...
एउटा पंथ (पंथी, ल्याटिनबाट "म विश्वास गर्दछु") विश्वासको संक्षिप्त रूप हो। यो महत्त्वपूर्ण सत्यहरु गन्न चाहान्छ, सैद्धान्तिक कथनहरु स्पष्ट पार्छ, सत्यबाट त्रुटिबाट अलग गर्दछ। यो सामान्यतया यस्तो तरीकाले लेखिएको हुन्छ कि यसलाई सजिलैसँग याद गर्न सकिन्छ। बाइबलका थुप्रै अंशहरूमा क्रिडको चरित्र छ। त्यसोभए येशूले योजना uses:--, मा आधारित एउटा योजनालाई एउटा पंथको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। पावल बनाउँछ ...